‘व्यक्तित्व विकासको प्रमुख आधार फेसन होइन’ | Nagarik News - Nepal Republic Media
‘व्यक्तित्व विकासको प्रमुख आधार फेसन होइन’
२२ भाद्र २०७६ १३ मिनेट पाठ
नेपाली चलचित्र जगतमा पहिचान बनाउन सफल चर्चित नायिका दिया मास्के पछिल्लो समय रियालिटी सो ‘रोडिज’ मा व्यस्त छिन् । रोडिजमा जजको भूमिका पछि उनी निकै चर्चामा छिन् । नेपाली चलचित्र जगतमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल नायिका दिया मास्केसँग नागरिक परिवारका लागि शुष्मा बरालीले गरेको कुराकानी :
हेलो ! नमस्ते, आराम हुनु हुन्छ ?
(हाँस्दै) नमस्ते म एकदम ठीक छु अनि तपार्इंको के छ नि ?
म ठिक छु ! अनि के मा व्यस्त हुनु हुन्छ अचेल ?
खासमा म परिवारसँग नै व्यस्त हुन्छु, कामको कुरा गर्दा भने अहिले रोडिज सो को फर्म्याट अनुसार तयारी पनि गरिरहेकी छु ।
तपाईंको विचारमा फेसन भनेको के हो ?
मेरो विचारमा फेसन भनेको कम्फर्ट पोशाक हो । सिम्पल होस्, स्विट होस्, शरीरअनुसार सुहाउने होस् त्यही नै हो, फेसन । हामी जहिले बजारमा आएका नयाँ ट्रेन्डलाई मात्र फेसन भन्छौँ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । अरुले लगाएको देखेर आफूले पनि त्यस्तै लगाउने ट्रेन्ड निकै छ, जुन गलत हो । फेसनेबल भन्नुको अर्थ फेसन अपडेट हुनु मात्र होइन् । व्यक्तिले लगाएको पहिरन, मान्छेसँग गर्ने व्यवहार, बोल्ने शैली, कुनै पनि विषयलाई बुभ्ने क्षमता सबै फेसनमा नै पर्छ, जुन बाहिरी आवरणले मात्र निर्धारण गर्दैन ।
तपाईं कत्तिको फेसनेबल हुनुहुन्छ त ?
म खास फेसनेबल भन्ने छैन, मलाई सिम्प्लीसिटी नै मन पर्छ । रियल लाइफ र रिल लाइफको पाटो नै फरक हो तसर्थ मेरो व्यक्तिगत जिन्दगीमा मैले लगाउने पहिरन, मेरो जीवनशैली साधारण छ, जुन आम मानिसको हुन्छ । ठाउँअनुसारको पहिरन लगाउन रुचाउँछु, पारिवारिक कार्यक्रम, जमघट वा घर बस्दा लगाउने होस् फरक नै हुन्छ ।
फेसन कन्सियस कत्तिको हुनुहुन्छ ?
फेसनप्रति खास कन्सियस छैन । मैले लगाउने पहिरन साधारण हुन्छ । व्यक्तिगत जीवनको कुरामा कम्फर्ट हुनु पर्‍यो पहिलो कुरा, मेरो पहिरनले मेरो परिवारलाई असर नगर्ने हुन पर्‍यो त्यही हो । बजारमा चलेको, ट्रेन्डिङ आएको, चल्तीका पहिरनभन्दा पनि आफूलाई कस्तो पहिरन गर्नु मन छ त्यही नै गर्छु ।
फेसनमा जोडिएको अनुभव कस्तो छ ?
हामी कलाकार, मिडियामा जोडिएका मान्छेले फेसनको त अनुभव धेरै नै हुने भयो । रिल लाइफ जस्तो देखिन्छु व्यक्तिगत लाइफ ठ्याक्कै विपरीत छ । म व्यक्तिगत जीवनमा कसैसँग घुलमिल हुने, फेसन फलो गर्ने त्यस्तो छैन, भनौँ म निकै लजालु छु तर स्क्रिनको कुरा गर्दा क्यारेक्टरलाई न्याय दिने खालको हुन पर्‍यो । मैले गर्ने काम मलाई चित्त बुझ्ने भएर नै काम गर्ने हो जस्मा म दिया मास्के भन्दा पनि क्यारेक्टरलाई आवश्यक फेसन दिन्छु चाहे त्यो टु पिस होस्, स्विमिङ् कस्ट्युम होस् या अरु मलाई फरक पर्दैन ।
तपार्इंको फेसनलाई फ्यानहरुले फलो गरेको महसुस गर्नु भएको छ ?
खास थाहा नै छैन, फ्यानहरुले मेरो लुगा लगाउने स्टाइल, मैले गर्ने फेसन फलो गरेको भन्दा पनि मेरो कामलाई, मेरो प्रस्तुतिलाई फलो गरेको हो कि ? फलो भन्नाले ठ्याक्कै फलो भन्दा पनि कामको प्रोसेस भन्नु चाहिँ फलो गरेको महसुस हुन्छ ।
नेपालमा फेसनको ट्रेन्ड कस्तो छ ?
नेपालमा अहिले युवा पुस्ताले फेसनप्रति कन्सियस भएको महसुस त गरेकी छु तर फेसनलाई नै बढी प्रायोरिटी दिएको महसुस हुन्छ जुन गलत हो । हो, पहिरनले मान्छेको व्यक्तित्व बढाउन केही मात्रामा मद्दत त गर्छ होला तर प्रमुख आधार फेसन वा उसले लगाएको लुगा, जुत्ता, शरीरमा छर्केको पर्फ्युमले होइन नै । युवा जमात फेसनप्रति उद्धार भएका छन्, निकै अपडेट पनि छन् तर, नलेजभन्दा फेसन आधार हुँदैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
तपाईंंको फेसन के त ? कस्तो फेसन मनपर्छ ?
मेरो फेसन यही भन्ने छैन, म प्रायः जिन्स, लङ टि–सर्ट, कुर्ताहरु लगाउन मन पराउँछु । म शरीरमा फिटिङ हुने ड्रेसअपहरु लगाउन रुचाउँदिन, दैनिक जीवनमा लगाउँदिन पनि अनि स्क्रिनका लागि हो भने छुट्टै कुरा हो ।
कैयौं युवा पुस्ताको नजरमा त तपाईं फेसनेबल हुनुहुन्छ नै, तपाईंकै फेसन फलो गर्नेहरु पनि छन्, फेरि आफू फेसनेबल भने छैन भन्नु हुन्छ ?
खासमा मेरो फेसनलाई नै फलो गरेको भन्ने त नहोला तर मलाई माया गर्नेहरुले, मेरो कामलाई बुझ्नेहरुले गर्नुभएको छ भने त्यो मेरा लागि खुसीको कुरा नै हो । (हाँस्दै)
फेसन भन्ने बित्तिकै के चाहिँ नछुट्याई लगाउनु हुन्छ ?
फेसनभन्दा पनि मेरो ब्याग भने अलिक ट्रेडिस्नल टाइपको हुन्छ, ब्यागमा हल्का खालको मेकअप किड, पर्फ्युम, मोबाइल, वालेट भने कहिल्यै छुट्दैन ।
तपाईंको दराजमा के को कलेक्सन भेट्न सकिन्छ ?
(हाँस्दै) खासमा मेरो श्रीमान् निकै पढ्नु हुन्छ, मेरो दराजमा त किताबै किताबको कलेक्सन देख्नु हुन्छ, तर फेसनको कुरा गर्दा भने मेरो दराजमा साडीहरुको टन्नै कलेक्सन छ । थरीथरीका रंगहरुको साडी भने टन्नै छन् ।
यहाँको मन पर्ने कलर कुन हो नि ?
मेरो एभरग्रिन मनपर्ने रंग कालो हो, क्याजुअल ड्रेसमा कालो नै मनपर्छ भने पार्टिवेयरमा भने कलरफुर लुगा नै मनपर्छ ।
फेसन भन्ने बित्तिकै हामीले लगाउने पहिरनलाई मात्र बुझिन्छ, तपार्इंलाई के लाग्छ ?
नेपालमा फेसन भन्ने बिक्तिकै लुगा, पहिरन मात्र हुनु स्वाभाविक हो भर्खर मात्र फेसन कन्सियस हुँदैछ त्यसकारण फेसन भन्ने बिक्तिकै पहिरनलाई नै मानिन्छ । तर फेसन भन्ने बिक्तिकै जीवन जिउने कला हो, जीवनशैली हो पहिरन त मात्र बाहिरी आवरण हो ।
विशेष व्यक्तित्व र आम मानिसको फेसनमा फरक हुन्छ कि हुँदैन ?
व्यक्तित्वका लागि विशेष र आम मानिस भन्ने हुँदैन । व्यक्तिको फेसनले उसको क्षमता, ज्ञान सीपलाई निर्धारण गर्न सक्दैन । फेसनलाई विशेष मानेर अघि बढ्नुभन्दा पनि आफूलाई सुहाउँदो, आरामदायी र सहज हुने पहिरन लगाउनु पर्छ । पक्कै पनि सेलिब्रेटीहरुलाई धेरैले याद गर्ने भएकाले फलो त हुन्छ नै उनीहरुले के गर्छन्, के खान्छन्, के लगाउँछन् भन्ने चासो त हुन्छ नै तर फेसन नै सफल व्यक्तित्वको पहिलो खुड्किलो भने होइन ।
अब, अहिलेको फेसनको कुरा गरौं । नेपालमा कस्तो फेसन चलेको छ त ?
नेपालमा फेसन भन्ने कुरा जसले जे लगाउँछ, ट्रेण्डमा परेको नै फेसन मान्ने चलन छ, तर खास मिलाएर राम्रोसँग, आफूलाई सहज हुने खालको पहिरन लगाउन सकियो भने त्यो नै फेसन हो । कतिले अरुले लगाएको देखेर लगाउँछन् त्यही फेसन हुन्छ, कतिले आफ्नै डिजाइनको बनाउन पठाउँछन् त्यही फेसन हुन्छ । नेपालमा यही भन्ने छैन, उमेर, ठाउँ अनुसार फरक–फरक छ ।
आफूलाई चाहिने सामान कता किन्नुहुन्छ नि ?
यही ठाउँमा किन्छु भन्ने छैन, हिँड्दै जाँदा मनपर्ने सामान देखेँ भने जहाँ पाउँछु त्यहीँ किन्छु । कसैले कहाँबाट किनेको भनेर सोध्यो भने पनि पसल नै बिर्सन्छु । मलाई आवश्यक पर्ने सामान यहीँबाट किन्छु भन्ने छैन ।
फेसनमा अपडेट सँगै शरीरको स्याहारमा कतिको ध्यान दिनु हुन्छ ?
शरीरको स्याहार त सबैले गर्छन् नै, शरीर स्वस्थ भए तन, मन सबै स्वस्थ हुन्छ । शरीरको स्याहारमा म विशेष स्याहार भने नङको गर्छु । कमजोर नङ भएकाले नेल कियरमा विशेष ध्यान दिन्छु । मेरो नङ अलिक कमजोर छ, त्यो भएर छोटो नै पाले पनि ध्यान दिनु पर्छ ।
फेसनमा अपडेट हुनका लागि के गर्नुहुन्छ ?
फेसन अपडेटलाई खास केही गर्दिन । म आफ्नो रुचिअनुसारको, सुहाउने पहिरन लगाउँछु । मैले लगाएको पहिरनले समाजले के भन्ला भन्ने भन्दा पनि मेरो परिवारलाई कस्तो लाग्ला भन्ने मेरा लागि मुख्य हो ।
किनमेलमा कत्तिको रुचि छ नि ?
खासै छैन, मलाई चाहिने सामान मात्र किन्छु, किन्दा जहिले एकै ठाउँबाट किन्न रुचाउँछु । पसल चाहारेर समय बिताउन सक्दिनँ ।
किनमेल गर्न मनपर्ने कुरा के हो नि ?
मलाई के मन पर्छ भन्दा पनि मेरा लागि के आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । आवश्यक हुने हरेक सामान किन्छु ।
अनि, सपिङमा सबैभन्दा अल्छी लाग्ने कुरा ?
सपिङमा कचकच, यो त्यो भन्नै मन लाग्दैन । चित्त बुझ्यो किन्यो बुझेन छोडेर हिँड्यो । पसल चहार्नु भने दिक्क लाग्छ ।
सपिङ गर्न एक्लै मनपर्छ कि साथीहरुसँग मनपर्छ ?
मेरो त्यत्ति साथीहरु छैनन्, प्रायः म परिवारसँगै सपिङ गर्छु, परिवारसँगै मन पर्छ । कहिले आफू एक्लै जान्छु ।
कुन –ब्रान्डको सामान किन्नुहुन्छ ?
ब्रान्ड भन्ने नै छैन । म त मन परेको सामान किन्ने हो, यही भन्ने छैन तर साडी ब्लाउज भने रोयल बुटिकको लगाउँछु ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७६ १४:३९ आइतबार
व्यक्तित्व विकास फेसन नागरिक परिवार